GOORTA LAGA SOO SAARO DABACASAHA BEERTA LOOGU TALAGALAY KAYDINTA GURIGA, SIDA LOO QODO IYO KU RID MAQSIN JIILAALKA, IYO MAXAY YIHIIN NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE LOOGU TALAGALAY? - KHUDRADDA
Talooyin loogu talagalay dadka xaafadda: sida iyo goorta la saarayo dabacasaha beerta loogu talagalay?
Kaliya kuwa si shakhsi ahaan ah u kora dalagyada beerta ayaa ogaanaya sida uu ugu fiicanyahay inuu soo goosto goosashada qani ku ah dhamaadka xilli-ciyaareedka. Karootada - mid ka mid ah dalagyada khudradda caanka ah ee ugu caansan ayaa koray meel kasta.
Laakiin si aad ugu raaxaysato khudradda quruxda badan iyo cufnaanta jirkaada leh fitamiinada xilliga qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo qodo si sax ah iyo marka ay ka fiican tahay inaad sameyso. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhammaan sifooyinka geedi socodka ururinta dabacasaha beerta iyo kaydinteeda xilliga qaboobaha.
Karootada - dhaqanka ma aha oo kaliya waxtar leh, laakiin sidoo kale aan qabyo ahayn. Waxay awood u leedahay inay ku noolaato xitaa aad u xooggan qabow. Kororka ugu weyn ee wax-soo-saarku wuxuu dhacaa inta badan bilawga xilliga dayrta (badanaa bisha Sebtembar), marka heerkulka caadiga ah ee cimiladu si deg deg ah hoos u dhaco.
DAREEN: Heerkulka kuleylka qiyaastii 6-8 digrii, kuleylka degdegga ah ee nafaqooyinka laga bilaabo dushooda khudradda ilaa xididada ayaa bilaabmaya. Biyo-jirku wuxuu dhacaa kaddib marka koritaanka xoogga dhaqanka ee dhamaystiran la dhammeeyo.
Laakiin haddii ay jiraan waxyaabo aan fiicneyn oo cimilada ah, bisaylku si weyn ayuu u gaabin karaa.
Noocyada ugu wanaagsan ee ilaaliya guryahooda inta lagu jiro jiilaalka
Ma jiraan noocyo karooto badan oo badan oo ku habboon kaydinta inta lagu jiro xilliga jiilaalka (sida loo doorto noocyada ugu wanaagsan iyo sida loo saxo iyaga si sax ah, akhris maqaalkayaga). Kuwa ugu "adag" waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Geranda. Qiyaas dhexdhexaad ah noocyo cagaaran oo casiir ah ayaa si fiican loogu hayaa jiilaalka. Ka mid ah cilladaha of kala duwan ayaa lagu tilmaami karaa oo kaliya cufan xad-dhaaf ah ee saxarka, sababta oo xididdada ma ku haboon yahay in lagu cuno foomka cayriin.
Grossa. Cunto kala duwan oo badan oo la kariyey oo ku noolaan kara guga.
Cardinal. Tartamada jiilaalka-adag, taas oo aan si wanaagsan loo ilaalin, laakiin sidoo kale waxay leedahay dhadhan fiican.
Losinoostrovskaya-13. Waxaa ku jira sawirro farabadan waxaana si fiican loo kaydiyaa xilliga jiilaalka.
Jiilaalka Moscow. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee kaydinta jiilaalka.
Forto. Noocyo si fiican loo keydiyay oo ku haboon samaynta casiirka.
Nantes-4. Darajo fiican ee kaydinta qaboobaha. Meel kasta oo lagu koray. Marka la abuurayo shuruudaha ugu fiican ee kaydinta, goosashada ayaa si fiican u dhici karta guga.
Ku saabsan waxa kale oo ay jiraan noocyo ku habboon, iyo nolosha shelf ee dabacasaha, waxaad halkan ka akhrisan kartaa.
Goorma ayaa la goosanayaa?
Maaha mid aad u fudud in la doorto xilliga ugu fiicneyn ee kaydinta dabacasaha, taniyo waqtiga loo yaqaan Bisaylka qudaarta xididka leh waxay ku xiran tahay dhowr arrimood.
U fiirso si faahfaahsan:
Kala sooc. Marka goosashada, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo noocyada kala duwan ee dalagga iyo diiradda saaro muddada koriinkeeda, oo ku xusan soo saaraha abuurka.
Tilmaamaha cimilada. Xilliga beergooyska beerta waxay si toos ah ugu xiran tahay cimilada gobolka ee karootiga la koray. Sidaas, cimilada diiran, goosashada waa la goostin karaa ma aha mar xilli xilli, laakiin ee adag - kaliya by bilowga dayrta oo keliya hal mar.
Joogitaanka xaaladaha cimilada xun. Haddii xilliga dayrta uu yimaado oo uu jiri doono roobab iyo qabow, waxaad bilaabi kartaa inaad qodto bisha Sebtembar, haddii dayrta uu yahay mid jilicsan, kalgacal, waxaad dib u dhigeysaa goosashada ilaa December.
Hoos-u-dhac ku saabsan daryeelka. Iyadoo daryeel tayo sare leh, miraha waa la soo ururin karaa iyada oo la raacayo qaangaarka kala duwan.
Tirada miraha. Noocyo waaweyn oo la jilciyey ayaa si dhaqso ah u rusheeyaa, iyo kuwa yaryar, siday u kala horreeyaan, si tartiib tartiib ah.
Xaaladda hoose ee topper. Marka dushooda ay bilaabaan inay u engegaan oo qalalaan, waxaad bilaabi kartaa goynta beerta xilliga qaboobaha.
MUHIIM: Haddii daryeesho dalagga ka midka ah tayada liidata ama aan la ilaalineynin dalagga sii kordhaya ee dhan, Bisaylka dalagga wuxuu noqon doonaa mid dheer, xataa haddii noocyo hore loo beeray goobta.
Sidee si haboon u ururisaa?
Dhowr usbuuc ka hor intaan la goynin, waxaa la joogaa waqtigii lagu joojin lahaa waraabinta si midhaha miraha ah aysan u dillaacin (haddii cimiladu diirran tahay). Maalinta waa in ay ahaato mid diirran, ugu habboon qoraxda ama ugu yaraan qalalan.
Haddii miraha ay gaaban yihiin ama dhexdhexaad ah, waxaad gacanta ka saari karootada: hal gacan waa inay qabsadaan dushooda, tan kale - si tartiib ah u qabso midhaha dhulka. Si aad u hesho miraha dheer, waxaa fiican in la isticmaalo koolfoor ama majarafad. Waxaad ka akhrisan kartaa xeerarka qashin iyo diyaarinta khudradda xilliga qaboobaha halkan.
Marka ay timaado wakhtiga beergooyska ee xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad kariso karootada qalabka. Halkan, ra'yiga beertu way kala duwanyihiin: qaar ayaa aaminsan in karootada jilicsan ay waxyeello gaarsiin karto majarafad, halka qaar kalena ay sheeganayaan inay tahay fargeeto ah in xididada si sahlan loo garaaci karo.
Sidaa darteed, doorashada ah qalab ku xiran yahay oo kaliya ku saabsan doorashooyinka shakhsiga ee ninkii beerta ka shaqaynayay. Halkan waxaa ah tusaale tusaale ah cirfiidka. Si taxaddar leh u wiiqi midhaha leh qalab iyo ka soo saar dushooda, isla markiiba nadiifinta dabacasaha dhulka.
Isla markiiba ka dib goosashada, dabacasaha waa in laga nadiifiyaa dushooda.sababtoo ah haddii aad ka tagto muddo dheer, waxay bilaabi doontaa in ay iska qaado dhammaan nafaqooyinka ka mid ah miro. Dusha sare ayaa si sahlan loo riixi karaa. Tani waxay yarayn doontaa nolosha shelf ee dalagga.
Ma aha lagama maarmaan in la qalajiyo midhaha: waxaad si deg deg ah ugu dhajin kartaa dalagga kaydinta sanduuqyada kaydka ah, horay loo kala soocayo iyada oo loo eegayo xajmiga midhaha. Ma noqon doonto mid aad u macquul ah si ay u bartaan sida si habboon loo gooyo iyo karootada daaqa, iyo sidoo kale heerkulka loo baahan yahay ee keydinta dabacasaha.
Waxaa jira hab kale oo lagu keydiyo dabacasaha, kaas oo aanad u baahnayn inaad ka qaaddo karootada sariiraha. Waxaad ka akhrisan kartaa arrimahan:
Sida loo ilaaliyo dabacasaha beerta ilaa guga: algorithm tallaabo tallaabo tallaabo ah, talooyin ku saabsan doorashada noocyo kala duwan.
Siyaabo siyaabo lagu ilaaliyo karootiga xilliga qaboobaha ee dhulka.
Sidee lagu kaydiyaa guriga?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo waxtar leh oo lagu keydiyo dabacasaha xilliga jiilaalka Maqsin ka dib goosashada. Hoos waxaan ka eegnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Waxay noqon doontaa mid waxtar leh in la akhriyo sida loo isticmaalo si habboon loo dhigo karootada loogu talagalay kaydinta jiilaalka.
Miraha karootada horey loo diyaariyey waxaa lagu shubay balka balka ah. Walxaha dabiiciga ah ee ku jira halabkooda waxay ka caawinayaan ka hortagga cayayaanka iyo cudurada miro.
Karootada waxaa lagu duubi karaa sanduuq ama si toos ah kuugu duubi karaya Maqsinka. Maadada waxaa lagu shubay shelf, miraha waxaa la saaray on top iyaga, ka dibna waxay si deeqsinimo daboolay leh sida balka.
Sanduuqyada geedaha leh daboolka
Tani waa habka ugu fudud ee lagu keydiyo karootada. Si loogu kaydiyo dalagga sidan ayaa u baahan doona sanduuqyada kaliya ee qoryaha ama kartoonada.
Sanduuqyada waa inaysan lahayn furitaan balaadhan.. Waxaa lagugula talinayaa in la dhigo meel yar, oo aan dhulka ku jirin.
Gawaarida waxaa lagu qasi karaa biyo si ay u helaan kalsooni isku dhafan. Miro kasta waa in lagu dhajiyaa xalka. iyo qalalan.
Xalka khudaarta waa inuu ahaadaa mid qalalan. Markaas miraha waxaa la dhigaa maqaasiinka maqaarka.
Wixii kaydinta sida karootada ah waxaad u baahan tahay ciid webiga oo aan nadiif ahayn.. Ka hor inta aan la isticmaalin, ciidku wuu ka fiicanyahay inuu qalalo.
Karootada waxaa la dhigaa sanduuqyo oo isku dhaf ah ciid oo leh qaro weyn. Hooska kor ku xusan ma aha mid lagama maarmaan, si aanay u helin saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo.
Eeg fiidiyowga ku saabsan kaydinta karootada ee ciidda:
Dhoobo biyo ah
Miraha lagu keydiyay habkan ayaa noqon doona mid been ah, laakiin waxay ku noolaan doonaan si fiican jiilaalka. Tani waa ikhtiyaarka ugu fiican ee kuwa haysta dabacasaha Maqsamkoo dhan marmarin.
Cawska ayaa lagu qasi karaa biyo si ay u labisato dharka muuqda. Mid kasta oo ka mid ah miraha waa in gebi ahaanba lagu dhajiyaa dhoobada iyo si fiican u qalalan.
Nuxurka habkan ayaa ku dhawaad ​​isku midka ah kaydinta dalagyada laga beerto ee balka bacaadka ah. Sanduuqyada ama dheriyo ballaadhan oo la daadiyey foosto qoyan oo engegan oo badan.
Waxaa fiican inaad ku shub carrot in layers, si taxadar leh ku rusheeyo lakabka kasta oo kabo. Saliidda ay ku jirto, waxay ka hortagi doontaa habka loo dhajiyo karootada.
Dumarka la dhalaalay
Iska hubi habka asalka ah ee loo keydiyo goosashada ilaa guga. Waxa kaliya oo lagama maarmaan ah in la diyaariyo digsiyada waawayn ee waawayn iyo ku dar miraha dabiiciga ah ee iyaga ku yaal, oo hore u qalajiyey qorraxda.
On top of karootada waxaa lagu daboolayaa maro ah, iyo ganaan la xiray dabool leh. Ku kaydi weelasha leh dalagga waa in uu ahaado Maqsin.
Sidii aad arki lahayd, ururinta dalagyada dallaga iyo diyaarintiisa kaydinta waa geedi socod fudud oo fudud, haddii aad raacdo xeerarka qaarkood oo si cad u raac, waxaad ku badbaadin kartaa miraha illaa maalmaha guga hore. Nasiib wacan